Lapho usuthathe isinqumo sokuyisebenzisa | I-Ota Citizen's Plaza
Lapho usebenzisa ihholo elikhulu, ihholo elincane, igumbi lombukiso, kanye nendawo yokuvivinya umzimba
Ezokuzijabulisa, futhi uma usebenzisa izinsizakusebenza zokuzijabulisa ezibonakala zidingeka ekuphathweni kwesikhungo, ngemuva kokuletha amadokhumende alandelayo inyanga eyodwa ngaphambi kosuku lokusebenzisa njengokujwayelekile, sicela uye kumabhalane nomhlangano.
Uhlelo noma ishadi lokuqhubeka, amapheshana, uhlelo lokuphepha, ithikithi lokungena (njengesampuli).
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, imicimbi esehholo elikhulu ingumdwebo wasesteji, umdwebo wokukhanyisa, nomdwebo we-acoustic.
Lapho usebenzisa igumbi lokuzijwayeza, isitudiyo somculo, igumbi lenkomfa, igumbi lesitayela saseJapan, igumbi letiyi, igumbi lobuciko
Ukusetshenziswa komlilo, njll. Isigaba Sokuhlola Isiteshi Somlilo iYaguchi
2-5-20 ITamagawa, Ota-ku Ucingo: 03-3758-0119
Ezokuphepha njll. Ikegami Police Station
3-20-10 Ikegami, Ota-ku Ucingo: 03-3755-0110
1-17-1 INishi-Shinjuku, iShinjuku-ku
Sicela usazise ngoba uzokwazi ukuthumela ibhodi lezimpawu endaweni ebekiwe ngosuku lomcimbi.
Ngosuku lokusetshenziswa, sicela wethule ifomu lokugunyaza ukusetshenziswa edeskini lokwamukela esitezi sokuqala esingaphansi ngaphambi kokusebenzisa igumbi.
Ukulungiselela inhlekelele, sicela uthathe zonke izindlela ezinjengokukhishwa kwezivakashi, ukuthintana nabezimo eziphuthumayo, usizo lokuqala, njll., Ngokuba nomhlangano oningiliziwe nabasebenzi nokunikeza abasebenzi kabusha.
Kunamagumbi ezingane esitezi sokuqala naphansi kwesithathu, ngakho-ke sicela wazise abasebenzi uma ufuna ukuwasebenzisa.Sicela uyiphathe ngokuzilawula komsebenzisi.
Ngemuva kokusebenzisa, buyisela okokusebenza okuvelayo kusimo sokuqala.Ngaphezu kwalokho, sicela uqiniseke ukuthi uhamba nezimpahla zakho ungazishiyi endaweni.
Uma indawo noma okokusebenza kulimele noma kulahlekile, kuzodingeka ukuthi unxephezele umonakalo.
Kukhona umgqugquzeli okhethekile esitezi sesibili esingaphansi (Umkhawulo wobude 2m)
Sizokunikeza umgqugquzeli ithikithi lokupaka. (Inombolo enomkhawulo) Ayikwazi ukusetshenziswa ngaphandle kwethikithi lokupaka.
Sicela uthumele ithikithi lakho lokupaka ewindini lemoto yakho.
Ayikho indawo yokupaka yabasebenzisi abajwayelekile.
Umhleli kufanele aqinisekise ukuthi abasebenzisi abajwayelekile abeza ngemoto.
Sicela ufake kusuka emnyango ongaphambili esitezi sokuqala sesinyathelo.Sicela usebenzise ikheshi ukufinyelela igumbi ngalinye.
Uma ungena usuka endaweni yokupaka esitezi sesibili esingaphansi, ungasebenzisa idivayisi ekhuphuka izitebhisi, yize kunezinyathelo. (Isisindo esifinyelela ku-2 kg) Uma usithinta ngaphambi kwesikhathi, umsebenzi uzobe elindile.
Amagumbi okuphumula anezinjongo eziningi atholakala esitezi sokuqala esingaphansi, ehholo elikhulu esitezi sokuqala, nasesitezi sesithathu.